Yan Aung: February 2009
ဒီနေ့ည ဒီသီချင်းလေးနားထောင်ဖြစ်ရင်း စာသားလေးတွေကို အရမ်းကြိုက်သွားတယ်. Coldplay အဖွဲ့ရဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ. အရောင်စုံဘ၀လို့ ဘာသာပြန်ရင်ရမလားပဲ.
ဆံနွယ်တွေကို သေချာစွာ သိမ်းထုပ်ဖီးသင်ပြီးတော့
'ကို... ကျမ ဘယ်လိုနေလဲဟင်..' တဲ့...
'မင်း ဒီည သိပ်လှတာပဲ အချစ်ရယ်...'
ကိုယ်တို့နှစ်ဦးသား မိတ်ဆုံစားပွဲကို သွားခဲ့ကြတယ်နော်.
ညင်သာစွာ ထိန်ငြီးတောက်ပနေတဲ့ လစန္ဒာအလား
ချစ်သူ့ဆံနွယ်လေးတွေ လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ အခိုက်အတန့်တစ်ချက်မှာ
လူပေါင်းများစွာရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်တန့်ကုန်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့.
'ကို... နေကောင်းရဲ့လားဟင်' တဲ့...
မဆိုင်းမတွဘဲ ကိုယ်လည်း ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်.
'ကို... ဒီည သိပ်ပျော်နေတယ် အချစ်ရယ်...'
မင်းလေးရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ချစ်ခြင်းရဲ့ အရိပ်အယောင်လေးတွေကို
ကိုယ် မင်းကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်မြတ်နိုးရတယ်ဆိုတာကိုပဲ..
မင်း မသိနိုင်ခဲ့လောက်အောင်ကို ကိုယ်မင်းကို သိပ်ချစ်နေခဲ့မိတယ်.
ကို. မင်းကို သိပ်ချစ်တယ် ချစ်သူ...
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ကြတယ်.
မင်း ကိုယ့်ကို အိပ်ယာထက် တွဲပွေ့မှေးစက်စေခဲ့တယ်နော်..
မီးခလုတ်ကို ပိတ်ခါနီး ကိုယ့်လက်အလှမ်းမှာ.
ကိုယ် မင်းရဲ့ မျက်ဝန်းညိုလေးတွေထဲကို
အို... အချစ်ရယ်... မင်း ဒီည အရမ်းလှတယ်.
Eric Clapton ရဲ့ "Wonderful tonight" သီချင်းလေးကို youtube မှာ နားထောင်မိပြီး ချရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ...